Ramananera Toussaint Joseph - "Fa hoy Jesosy taminy, Izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino Ahy, na dia maty aza dia ho velona indray... " Jaona 11,25
Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa natsoin ‘ny Ray hody any aminy ny malalanay ny Alatsinainy 04 febroary 2013 rehefa nivahiny 73 taona teto an-tany.
Ny vadiny: RABEMANANTSOA Simone
Ny zanany: RAMANANERA Patrick mivady
RAFALIMANANA Elisa mivady
Ny zafiny: RAFALIMANANA Kevin
Ny iray tampo aminy:
(Feu) RAMAROLAHY Raphael mivady ary ny zanaka aman-jafiny
(Feu) RAMANANERA François mivady ary ny zanaka aman-jafiny
(Feu) RAMANANERA Albert mivady ary ny zanaka aman-jafiny
RAMANANERA Vincent mivady ary ny zanaka aman-jafiny
(Feu) RAMBELOSON Dorothé ary ny zanaka aman-jafiny
RAHARIZONINA Isabelle mivady ary ny zanaka aman-jafiny
RABEMANANTSOA Richard mivady ary ny zanaka aman-jafiny
(Feu) RABEMANANTSOA Gérard mivady sy zanany
RABEMANANTSOA Joéline ary ny zanaka aman-jafiny
RABEMANANTSOA Georges mivady ary ny zanaka aman-jafiny
RABEMANANTSOA Julien mivady ary ny zanaka aman-jafiny
(Feu) RAMILIJAONA Marie françoise mivady ary ny zanaka aman-jafiny
Ny nofony dia hiala ao amin’ny 7 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris amin’ny zoma 8 Février 2013 amin’ny 2 ora, ka hisy fiaraha mivavaka miaraka ny Alarobia 06 Febroary amin’ny 03 ora ka hatramin’ny 16 ora hariva adiresy etsy ambony Ialana tsiny ireo zay tsy tratra antso noho ny hafen-drano be loatra.
Tsy misy fiharetan-tory.
Ny famangiana dia manomboka ny 06 Febroary 2013 amin’ny 03 ora ka hatramin’ny 18 ora hariva.
Ny Alakamisy 07 Febroary 2013 manomboka amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny 12 ora atoandro ary ny hariva manomboka amin’ny 2 ora hariva ka hatramin’ny 06 ora hariva.
Ny razana dia mbola ho entina mody any antanindrzana ka miangavy antsika mianakavy mba tsy hanisy voninkazo fa solon-dranom-bary tsy masaka ho fanomezam-boninahitra an’ny tompokolahy no fanirian’ny fianankaviana.
« Fa izaho, dia eo akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy »
(Salamo 73 : 28)